Matipi & Tricks |
Chii chatinofanira kuita pamberi pe SMT maPCB panguva yePCB gungano maitiro?
Chii chatinofanira kuita pamberi pe SMT maPCB panguva yePCB gungano maitiro? PcbFuture ine smt inounganidza fekitori, iyo inogona kupa iyo SMT gungano masevhisi kune diki diki pasuru 0201 zvikamu. Iko kutsigira dzakasiyana siyana nzira dzekugadzirisa senge Turnkey PCB musangano uye pcba OEM masevhisi. Zvino, ini ndicha intr ...
Iyo yakajairika dhizaini kesi kesi dzeBGA muPCB / PCBA
Isu tinowanzo sangana nehurombo BGA soldering mukuita kwePCB gungano maitiro nekuda kwekukanganisa PCB dhizaini mune basa. Naizvozvo, PCBFuture ichaita pfupiso uye sumo kune akati wandei zvakajairika dhizaini kesi uye ini ndinovimba inogona kupa yakakosha maonero kune PCB vagadziri! Iko kune kunyanya t ...
Standard yetini bead paPCBA bhodhi
Iyo inogamuchirwa chiyero chehukuru hwetini bead pane PCBA bhodhi pamusoro. 1.The dhayamita pamusoro gaba bhora haapfuuri 0.13mm. 2. Huwandu hwemataini ane dhayamita ye0.05mm-0.13mm mukati mehurefu hwe600mm haidarike kupfuura mashanu (kudivi rimwe). 3. Huwandu hwemataini ane dhayamita ...
Pcb gungano kugadzirwa maitiro
PCBA inoreva maitiro ekumisikidza, kuisa uye kugadzira zvisina kusimba PCB zvikamu. Iyo nzira yekugadzira yePCBA inoda kupfuura nhevedzano yemabatiro ekupedzisa kugadzirwa. Zvino, PCBFuture ichaunza akasiyana maitiro ePCBA kugadzira. PCBA yekugadzira maitiro inogona kukamurwa ...
Vatengi vazhinji vaisaziva nzira yekusarudza kana vachitsvaga mafekitori ePCBA. Kune mafekitori egungano rePBB akawandisa, uye pamusoro pawo anoita kunge akafanana. Saka tingawana sei yakakodzera PCBA fekitori? Izvo zvakakosha kuti usarudze fekitori yePCBA ine yakakodzera gadziriro yekugadzira ...
Nei uchisarudza PCBFuture yePrototype PCB musangano
1. Simba rekusimbisa SMT semusangano: isu takatumira kunze michina yekuisa uye akawanda optical ongororo michina, iyo inogona kuburitsa mamirioni mana mapoinzi pazuva. Maitiro ega ega akashongedzerwa nevashandi veQC kuitira kuti chengetedza mhando yechigadzirwa. DIP yekugadzira mutsetse: Kune maviri mafungu emagetsi emagetsi. ...
Ndiani anogona kupa pcb Assembly Assembly yemabhizimusi ekudzora mabhodhi
PCBFuture inogadzira PCBA OEM iyo inopa hunyanzvi hwePCB yekugadzira, kutenga zvinhu, PCBA imwechete-yekumira kugadzirwa nekukurumidza uye mamwe masevhisi epamusoro nevatengi. Inogona kupa PCBA OEM masevhisi emaindasitiri ekudzora mapaneru. PCBA bhizinesi inosanganisira misa EMS uye OEM proce ...
Ndekupi kwaunogona kuraira iyo inokurumidza prototype PCBA
PcbFuture ndeye PCBA inogadzira inogadzira ine yayo pcb bhodhi fekitori uye SMT chip fekitori. Inogona kupa PCBA nekukurumidza proofing services kune vatengi. Zvino, ini ndichaunza PCBA yekukurumidza proofing kugona uye maitiro. Iyo PCBA inokurumidza proofing kugona: PCBFuture ine gumi nyanzvi componen ...
PCBFuture inyanzvi PCBA inogadzira iyo inogona kupa PCBA OEM masevhisi akadai sePBB yekugadzira, zvigadzirwa zvekutenga, SMT chip kugadzira, DIP plug-in kugadzira, gungano kuyedza, nezvimwe. Zvino, ngatitaurirei kuti mafekitori ePCBA anovimbisa sei kuti izvo zvakatengwa zvinhu zviri chepakutanga? Com ...
Iyo PCBA nguva yekuendesa iri pedyo chaizvo neyakafanobata-mashandiro Vatengi vanofanirwa kutanga vatora zvinhu zvinotevera. Izvo zvinhu zvinogona kuendeswa mukati memazuva matatu mushure mekunge zvese zvinhu zvapera. Kana paine DIP yekugadzirisa, zvinotora mazuva 5-7 kuendesa. Kana uine akaraira ekukurumidzira anogona kuve ...
Mashandisiro anoita makambani kudzora mutengo weSMT
Parizvino, China rave zvigadzirwa zvekugadzira pasirese. Takatarisana nemakwikwi emusika, maitiro ekuenderera mberi nekuvandudza mhando yechigadzirwa, kudzikisa mutengo wechigadzirwa, kugadzirisa mashandiro, uye kupfupisa nguva dzekutungamira chikamu chikuru chekugadzira manejimendi ekambani. SMT iri pamusoro gungano technolo ...
Kukosha kukuru kweESD kuchengetedzwa mumagetsi musangano musangano
Kune akawanda akajeka emagetsi zvigadzirwa pamabhodhi egungano rePCB, uye zvinhu zvakawanda zvinonzwisisika nemagetsi. Shocks dzakakwira kupfuura yakatarwa voltage zvinokanganisa izvi zvinhu. Nekudaro, PCBA yakakanganiswa nemagetsi emagetsi akaoma kuongorora nhanho nhanho panguva yekuyedza kushanda. ...